Isifo sikashukela i-Ophthalmopathy: Ukwelapha Izinkinga Zesifo Sikashukela > Izinkinga zesifo sikashukela
Izinguquko ezithweni nasezinhlotsheni zesifo sikashukela
Ukuthuthukiswa kwe-ophthalmopathy kubonwa kuphambene nesizinda sokuthuthuka kwesifo sikashukela, okuyisifo esiyinhloko. I-Pathology ibangelwa ukuvela kokuphazamiseka ezinqubweni ze-carbohydrate metabolism emzimbeni womuntu.
Ukuvela kwe-ophthalmopathy yesifo sikashukela kuhlotshaniswa nokwenzeka kokuphazamiseka komzimba, i-biochemical and immune immune emzimbeni. Enye yezinkinga ezivame kakhulu ekuqhubekeni kwesifo sikashukela wukushintsha kwezakhi zegazi nezinguquko odongeni lwe-vascular sohlelo lokujikeleza kwegazi.
Lezi zinguquko zivusa ukukhula kwezinqubo ze-pathological eziholela ekubukekeni indlala komoya-mpilo okungapheli ezingxenyeni zesitho sombono.
Ukuntuleka komoya-mpilo kuholela ekulimaleni kwe-retina. I-retinopathy yesifo sikashukela iqala ukukhula emzimbeni. Le Psychology, ngokwezibalo zezokwelapha, ilinganiselwa cishe ku-70% wawo wonke amacala akhonjwayo wokuthuthuka kwe-ophthalmopathy yesifo sikashukela.
Ama-30% asele wemilandu ebikiwe ye-akhawunti yesifo sikashukela sokukhubazeka kwentuthuko:
ikati lesifo sikashukela
ukwehla kwesikhashana kwe-acuity ebonakalayo.
Uma kunesifo sikashukela emzimbeni, iziguli kufanele zikhumbule ukuthi ukuntuleka kokulawula amazinga kashukela wegazi kunomthelela ekuqhubekeni kwezinkinga ezinzima emzimbeni ngokumelene nesizinda sesifo esikhona.
Izinguquko esitholeni sombono ngokuthuthukiswa kwe-ophthalmopathy yesifo sikashukela
I-retinopathy yesifo sikashukela, eyona nkinga ejwayelekile yesifo sikashukela, yisilonda esibonakalayo sesitho sokubona. Le nkinga kungenzeka kakhulu inesifo sikashukela sohlobo 1. Ehlelweni lokuqhubeka kwesifo siguqukela odongeni lwe-vascular kuholela ekuwohlokeni okukhulu kombono noma ukulahleka kwaso ngokuphelele.
Ukuthuthukiswa kwalolu hlobo lwe-ophthalmopathy yeswekile njenge-diabetesic retinopathy kuholela ezinguquko odongeni lwe-vascular of capillaries of eyeball, ngasikhathi sinye ukukhula okusebenzayo kwemikhumbi esanda kusungulwa.
Ngaphezu kwalezi zinqubo, ukutholakala kwama-pathologies endaweni yama-macula kuqashelwa ezinhlamvini zamehlo.
Ukuthuthukiswa kwe-ophthalmopathy yesifo sikashukela kungabonakala ezinhlotsheni eziningana ze-pathologies ye-optic nerve.
Ukuthuthukiswa kwalokhu noma kwalolo hlobo lwe-pathology kuncike kakhulu ezingeni lokuqhubeka kwesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, indlela ye-pathology ebonisiwe ingahle ihambisane nezici zomzimba womuntu ogulayo.
Ama-pathologies ajwayelekile kakhulu ku-opic nerve yile:
I-Atrophy yezinzwa ze-opic iyisifo esihambisana nokuthuthukiswa kwesifo sikashukela ebusheni. Le ndlela yokusebenza ibonakala ngokuncipha okuqhubekayo komuthi obonakalayo, ukuncishiswa kwe-angle yensimu yokubuka kanye nokufiphaza ama-discs ezinzwa zezinzwa.
I-papillopathy yenzeka ngokuncipha kokugula okungaphansi, ukuthuthukiswa kwe-pathology kuhambisana nokuvela kokuhlaselwa okubukhali kombono okufiphele. Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukiswa kwalesi sifo sibonisa ngokubonakala kwe-edema ye-photosensitive nerve ne-corpus luteum.
I-neuropathy ye-anterior ne-posterior ye-ischemic genesis ibonakala ngokubonakala kwezimpawu ezinjengokuncipha kwenhliziyo eyodwa ku-acuity obonakalayo kanye nokuvela kwento efana nokulahleka kwesigaba emkhakheni wokubuka.
Umphumela wokuthuthuka kwezinqubo ze-pathological ezikhulayo esigungwini sombono kungukulahlekelwa okuyingxenye noma okuphelele kombono kanye nokuvela okuyingxenye noma okuphelele kokuqina kwezinzwa.
Isikhumba sabantu abanesifo sikashukela esincibilikisiwe ngenxa yokuphelelwa ngamanzi sesomile, sibunjiwe, siqinile futhi siqinile ezintendeni zezandla nakwezinzondo, i-turgor yaso incishisiwe. Njengoba unesifo sikashukela esisebenza isikhathi eside, cishe ama-80% abantu anama-dermatoses ahlukahlukene ahambisana nokuphazamiseka kwe-metabolic, ukwehla komsebenzi wokuvikela isikhumba kanye ne-microcirculation ephazamisekile. Ezinganeni ezinenkambo esebenza kanzima yesifo sikashukela i-mellitus, isimilo esiqhamukayo (isifo sikashukela) siyabonakala - umphumela wokwanda kwama-capillaries esikhumba - enikeza iziguli ukubukeka okukhohlisayo kwempilo eqhakaza. Iziguli "ezinolwazi" zingahlakulela i-dermopathy yesifo sikashukela ngesimo se-atrophic enkulu, amabala axakile, amabala angenaphutha ngaphambili kwemilenze. Ngokuthuthukiswa kwe-angiopathies enesifo sikashukela, izilonda ezi-trophic esikhunjeni semilenzeni ziyabonakala.
Hlela i-Xanthomatosis |
Uhlobo 1 lwesifo sikashukela isifo sikashukela yisifo sohlelo lwe-endocrine, okuyisici esibonisa ukwanda kweglucose egazini, okuvela ngenxa yezinqubo ezibhubhisayo kumaseli athile e-pancreatic agcina i-hormone - insulin, ngenxa yalokho kunokuntuleka ngokuphelele kwe-insulin emzimbeni
Isifo sikashukela sonyawo sikashukela
Isifo sikanyawo sikashukela singenye yezinkinga zesifo sikashukela, kanye nesifo sikashukela, i-nephropathy, njll., Okuyisimo se-pathological esenzeka ngenxa yomonakalo ohlelweni lwe-peripheral neva, i-arterial kanye ne-microvasculature, esizibonakalisa njengenqubo ye-purulent-necrotic, izinqubo zokulimala kanye nokulimala kwamathambo nokuhlangana konyawo.
Isifo sikashukela yigama elihlanganisa izifo ze-endocrine, okuyisici esikhona okuwukuntuleka kwesenzo se-hormone insulin. Uphawu oluphambili lwesifo sikashukela ukuthuthukiswa kwe-hyperglycemia - ukwanda kokuxineka koshukela egazini, okuphikelelayo
Ukusebenza kokwelashwa kwesifo sikashukela ngqo kuya ngesikhathi sokutholwa kwalesi sifo. Nge-Type 2 sikashukela mellitus, lesi sifo singadala kuphela izikhalazo ezithambile isikhathi eside, isiguli esingase singasinaki. Izimpawu zesifo sikashukela zingasuswa, zenze ukuthi kutholakale kunzima ukuthola isifo. Ngokushesha lapho ukuxilongwa okuyikho kwenziwa futhi ukwelashwa kuqalile, kunciphisa ingozi yokuthola izinkinga zesifo sikashukela
I-insulin yi-hormone ekhiqizwa amaseli we-beta wezigcawu ze-pancreatic zeLangerhans. Igama elithi insulin livela endaweni yesi-Latin insula - isiqhingi
Ochwepheshe beNorthwestern Endocrinology Center baqhuba ukuxilongwa kanye nokwelashwa kwezifo zohlelo lwe-endocrine. I-endocrinologists yalesi sikhungo emsebenzini wabo isuselwa ezincomeni ze-European Association of Endocrinologists kanye ne-American Association of Clinical Endocrinologists. Ubuchwepheshe besimanje bokuxilonga nokwelashwa bunikeza umphumela wokwelashwa ofanele.